लज्जित भएर डा‌. सावकाे समर्थन गर्न आएको हुँ: डा. भट्टराई – Health Post Nepal
२०७७ असोज १४ गते १८:५७
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई क्यान्सर नभएको चिकित्सकको निष्कर्ष
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विगत १७ दिनदेखि अनशनरत चिकित्सक गोविन्द केसीलाई भेटेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीस्तरिय नेतृत्वबाट डा. केसीसँगको भेट यो पहिलो हो।
केसीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको स्थितिमा भट्टराईले केसी अपचाररत त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै पुगेर सत्याग्रहप्रति नैतिक समर्थन जनाएका छन्।
उनले भेटका क्रममा डा. केसीसँग यो अवस्थामा भेट्न आउनुले आफूलाई लज्जित बनाएको बताएका छन्। सर्वसाधारणको हक हितमा माग राख्नेलाई सरकारले यस्तो अवस्थामा पु¥याउनु दुभाग्र्यपूर्ण रहेको भन्दै आफू पनि लज्जित भएको बताए।
‘के गर्नु म बढो लज्जित भएर डा. सावलाई नैतिक समर्थन गर्न मात्रै आएको हुँ। के गर्नु?’ उनले भने। भट्टराई हाल डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरु साझा भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई आफ्नो मुद्दा नठान्नु लज्जाबोध भएको बताए। ‘सबैको साझा मुद्दा उठाउनु भएको छ, यो त राजनीतिक दलका नेतृत्वले उठाउनुपर्ने हो। तर तपाइँले मात्रै उठाउनुभएको छ। पटक पटक अनशन पनि तपाइँले मात्रै बस्नुपर्ने भयो। मलाई लज्जाबोध भएको छ।’
भट्टराईसँगै गएकी उनकी पत्नी हिसिला यमिले पनि डा. केसीले उठाएका माग सबै जनताका साझा रहेको बताइन्। ‘तपाइँ साच्चिकै महान हुनुहुन्छ, तपाइँ एक्लै भए पनि लड्नुभएको छ। आज यतिका दिनसम्म पनि सरकारबाट वार्ताका लागिसमेत पहल नहुनु अत्यन्तै लज्जाको विषय हो,’ उनले भनिन्।
Tags: डा‍. गाेविन्द केसी, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बाबुराम भट्टराई, हिसीला यमि